Date My Pet » Dimy Soso-kevitra amin'ny fomba hanatonana A Jamba Date
Last nohavaozina: Sep. 26 2020 | 2 min namaky
Mampiaraka dia mety ho traikefa goavana. Jamba mampiaraka afaka handao anao avy ao amin'ny maizina amin'ny traikefa goavana. Fa tsy misy ilaina ny nisalasala ny jamba daty traikefa. Tsy fantatrareo izay mety hihaona.
Loharano azo itokisana - Iza no mametraka ny jamba ny daty mety ho manan-danja ny ny fanantenanao. Raha misy zanaky ny anareo dia nanolo-kevitra ny daty, mieritreritra momba izay mety ho namana io avy. Anontanio ny antony mahatonga azy ireo te nametraka anao ary inona no karazana fifandraisana iray ianao heveriny hizara amin'ny daty. Izany dia mety ho zava-nitranga manan-danja mba manana olona vaovao, rehefa mihaona voalohany.
Tsotsotra toerana - toerana tsara dia afaka manao daty jamba mora. Mifidy ny toerana sy ny voly mahalana izay samy mahalala izay hitranga. Casual toerana toy ny trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana tsara indrindra ho an'ny jamba ny daty. Misy safidy fotoana fohy toy ny manana ny zava-pisotro, ary raha miara-mandeha tsara rehetra, ny daty azo omena ho sakafo hariva intsony daty. Koa, mahafinaritra safidy lehibe. Fanaovany asa toy ny Mini Golf na Bowling mety Mahafinaritra sy flirty tsy miantehitra be loatra amin'ny olona iray resaka. Aza mifidy toerana fiarahana iombonana toy ny sarimihetsika teatra rehefa tsy hahazo ny fahafahana hianatra na inona na inona momba ny samy hafa.
Akanjo araka ny tokony ho - Ladies Tadiavo stylish nefa tsy ny zava-drehetra avy amin'ny fampisehoana. Zavatra tsotsotra sy ary fomba tsara groomed. Ny olona dia te-hijery mahalana nefa mbola stylish. Aza manao ny fahadisoana ny fanaovana zavatra tsy mahazo aina ianao ao toy izany dia hampiseho amin 'ny alalan eo amin'ny toe-po momba ny daty
Miresaka amim-pahatokiana – Aoka ny tenanao sy fisehosehoana ny tsara indrindra ny zavatra mahatonga anao manokana. Nefa tsy hanadino ny mangataka ny fanontaniana maro momba ny daty, ho liana eo amin'ny fiainany, ary mamorona ny sasany fifandraisana tsara. Raha nifanena tamin'ny alalan'ny datemypet.com, maneho ny tsara indrindra ny biby Buddy ho toy ny tombontsoa iombonana mety manana. Manasongadina ny zavatra mahaliana sy ny fialam-boly ary ny fifandraisana misy tantara hamela resaka am-baravarana.
Manana fomba fijery tsara - Ataovy azo antoka ny hitondra ny mitsiky tena ho an'ny jamba daty. Ho faly ianao fa mahazo ny fahafahana hihaona olona vaovao sy marina hiaraka ny fizotran'ny. Ny fanalahidin 'ny manana daty lehibe dia ny ho faly sy loveable, ka ho tenanao sy hankafy ny jamba daty.